Maxa Iska Galay Madax Dhaqameedka Iyo Siyaasada. WQ- Xamse Maxamed Cali | Haqabtire News
Maxa Iska Galay Madax Dhaqameedka Iyo Siyaasada. WQ- Xamse Maxamed Cali
May 24, 2016 - Written by Aragtida Bulshada
Runtii waxaa soo badanaaya madax dhaqameedku saamaynata ay kuleeyihiin arimaha siyaasada dalka iyadoo aad marwalba arkayso madax dhaqameedkeenii oo kahadlaaya arimaha siyasaada iyo marxaladaha uu dalku maraayo iyagoo u dhaqmaaya amba u hadlaaya sidii siyaasiyiinta oo kale taasina maaha mid wanaagsan marka loo eego titleka ay xambaarsanyihiin.
Xaqiiqadii waxa aan shaki kujirin inaanay garanayn madax dhaqameedkeenu waxa ay shaqadoodu tahay iyo waxyaabaha ku haboon inay kahadlaan gabi ahaanba haday yihiin salaadiinta, cuqaasha, garaadka, ugaasyada iyo boqoradu.
Madaxdhaqamedeedka shaqadiisu waxay tahay inay kashaqeeyanaan arimaha amaanka, arimaha reerka uu ka masuulka yahay iyo midaynta beelaha dalka oo dhan. Aniga ariagti ahaan waxay kahadli karaan ariamaha siyaasada markay timaado khilaaf udheaxeeya xisbiyada dalka mucaarad iyo muxaafidba si aanay amaanka dalku khalkhal u galin waxii aan intaas ahayn waxaa haboon inay ka aamusaan oo aanay ku dhex milmin.
Runtii waxaad maalin walba arkaysaa madaxdhaqameedkii qaar ka mid ah oo u qabanaaya shir jaraaid dhamaan qaybaha kaladuwan ee warbaahinta oo kahadlaaya arimaha siyaasada dalka gaar ahaan mawduuca markaas taagan, Waxaan kusoo gabagabaynayaa oo aan ugu baaqayaa dhamaan madax dhaqameedka in aanay kumilmin siyaasada oo ay kashaqeeyaan arimaha nabad galyada sidii loosii xoojinlahaa .